ဝေဖန်မှုများနေသည့် အ ဆိုတော် ယုန်လေး သီချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အေးနေဝင်း ပြောပြီ – Zartiman
ယုန်လေးMTVရဲ့ နောက်ဆုံး ရိုက်ခတ်မှုက အနုပညာကဏ္ဍ။ သူ့ရိုက်ထားတာကို ကြိုက်လို့ချီးမွမ်းတာ၊ မကြိုက်လို့ ဝေဖန်တာက သက် ဆိုင်ရာ ကာယကံရှင်တွေရဲ့ ပြောပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်မှု။ ဒါပေမယ့် တော်တော်မျက်လုံးပြူးသွားမိတာက ဒီအထဲ ဝင်သရုပ်ဆောင်၊ သီဆိုခဲ့တဲ့ ကလေး တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်ဆီက တိုက်ရိုက်ပြန်ကြားရတာ။ သူတို့ပြောတာက “လူတွေ စိတ်ဓာတ်တွေမကောင်းဘူး။ line ပေါ် မတင် ခင် ရုပ်ရှင်ရုံမှာ အားလုံးစုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ လက်ခုပ်တွေဝိုင်းတီးကြပီးတော့၊ အမှားဆိုပီးဖြစ်လာတော့မှ အချင်းချင်းတောင် ပြန် ကျုံးကြတယ် ” တဲ့။ အဲလို မတင်ခင် အမြည့်ကြည့်ခဲ့ဖူးသူတွေက နောက်မှ ပြန်ဖောင်းထုတဲ့အထဲပါတဲ့ သက်သေတွေ ပေါ်လာရင်။
သူတို့လည်း ဂွမ်းပြီနော်။ ဦးသန်းဌေးရေ.. အားမငယ်ပါနှင့်။ ဂွမ်းဖော် ဂွမ်းဖက်တွေ အဆဲခံသရဖူပြန်လုချင်လုသွားဦးမှာ။သုံး ရက်လောက် နေတော့ နည်းနည်း အနည်ထိုင်စပြုတော့မှ အခြေအနေ ရုပ်လုံးပေါ်လာတယ်။ ဒီ ဗီဒီယိုထွက်လာပြီး အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးအပေါ် အကျိုး သက်ရောက်မှုတွေကိုကြည့်ရင် .NLD ဖက်က ပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ အောင်မြင်မှုအရရှိဆုံးပဲ။ သူ့ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေ အခု တစ် ချိန်တည်းမှာ အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်လာတယ်။ အနုပညာရှင် အချို့ကပါ ဒီဗီဒီယိုကို ဝေဖန်ခံရတော့ သူတို့နောက်ကအား ပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကိုပါ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်မှာ ကြိုတင်စုစည်းပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။
နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို နှောက်ယှက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်သို့မဟုတ် ပုံရိပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရင် အ ဆိုပါခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာ ကြည်ညိုမှု ကရုဏာ ဖြစ်စေတာ ထုံးစံပဲ။ ၁၉၈၁ ခုနှစ် မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်သမ္မတ ရေဂင်ကို သေနတ်သမား ဂျွန် ဟင်ကလီက မအောင်မြင်သော လုပ်ကြံမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရာမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုကို လူ တွေမြင်ခွင့်ရလိုက်တယ်။ ဒီဗီယိုမထွက်ခင် သမ္မတရဲ့ ထောက်ခံမှုစစ်တမ်း ၆၀% ရှိရာကနေ ဗီဒီယိုထွက်လာပြီးတော့ ၆၉% အထိခုန်တက် သွားတယ်။ ဒါက တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာ၊ တကယ်မဟုတ်ဘဲ အနုပညာလှုပ်ရှား ဖန်တီးမှုအနေနှင့် သမ္မတ လေယာဉ်အပိုင်စီးတာတို့၊
အိမ်ဖြူတော် အသိမ်းခံရတာမျိုး ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်လည်း လက်ရှိသမ္မတအတွက် စည်းရုံးရေး အမြတ်ထွက်တာပဲ၊ ဒါကြောင့် ကလင်တန် လက် ထက်ရိုက်တဲ့ Air Force One မှာ သမ္မတဇာတ်ရုပ်ကို ကလင်တန်တို့ မိသားစုပုံမျိုးရိုက်တာ၊ အိုဘားမားလက်ထက်က ဇာတ်လမ်းတွဲ 24 မှာ သမ္မတ Wayne Palmer ကို အိုဘားမားနှင့် ရုပ်တူအောင် ထည့်ရိုက်တာလေ။ ဒါ တွေကြောင့် အကျိုးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် သမ္မတတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်မှာ လုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားခံရတဲ့ သူရဲကောင်း ဇတ်လမ်းမျိုး သိပ်ရိုက်စေချင်တာ။ အခုလည်း ဒီမှာ ဟိုနေ့က video ထွက်ပြီးတဲ့နောက် NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အတွက် တကယ်လည်း စည်းရုံးရေး အထောက်အကူဖြစ်သွားတာပဲ။
ပထမပိုင်း အကွက်မှာ စီးပွားရေး ရပ်ဆိုင်းလို့ အောက်ခြေလူကတန်းစားတွေ ထိခိုက်တာမျိုးရိုက်တာကြောင့် တကယ် ခံစားရသူတွေကြား မှာ NLD ပုံရိပ်ကို အထိုက်အလျောက် ထိခိုက်စေပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ ကရုဏာအပြည့်ပြန်ရလို့ အားလုံးခြုံကြည့်ရင် NLD အမြတ်အ ထွက်ဆုံးပဲ။ NLD က စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်ကြောင့် သက်တန်းငါးနှစ်အတွင်း အားမရစရာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ခေါင်းဆောင်ပုံရိပ်နှင့် ပြန် ဆယ်ပြီး အခြေအနေကောင်းနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့သဘော သိလိုက်ရတယ်။ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဖက်ကကျတော့ အဂွမ်းဆုံးဖြစ်သွားတာ၊ အစည်း ဝေးမှာ NLD အမတ်မင်းတွေရော၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အမတ်မင်းတွေရော တက်ရောက်ဆွေးနွေးပေမယ့် NLD အမတ်တွေကိုပဲ။
ပရိသတ်က သတိထားမိကြတာ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို လူရာသွင်းပြီး ထည့်ကို အပြောမခံရတာ ပထမ ဂွမ်းချက်၊ နောက်ဆုံး ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေးပုံထည့်လိုက်တာကကျတော့ ….. အိုး ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ဤနေရာတွေ သေးပန်းပါလို့ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ပေးလိုက်တာကျ နေတာပဲ၊ ဒီဗီဒီယိုကို မကြိုက်တဲ့သူတွေက ယုန်လေးပြီးရင် မို့မို့မြင့်အောင် ဒုတိယလိုက်ပြီး ဆဲကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်တာ ဦးသန်းဌေးက သူလည်း ဝင်မရိုက်ရရှာဘဲ မမို့ရဲ့ နေရာဝင်ယူပြီး အဆဲခံပေးသွားတာ။ လှုပ်ရှားပြီး သရုပ်ဆောင်စရာတောင် မလိုဘူး။ ရုပ်သေ ဓါတ်ပုံ လေးနှင့် အဆဲခံသရဖူ ဝင်လုသွားတာ။ “ထသွားမှ အကျိုးမှန်းသိ” လို့ဆိုရအောင်ကလည်း ။
သူက ဖိုးပါချင်အဖြစ် ဝင်သရုပ်ဆောင် ရတာလည်း မဟုတ်ဘဲ ပိဋကတ်တော်ထဲပါတဲ့ လေထဲလွင့်လာတဲ့ ဗီဒီယိုတည်းဟူသော မီးကွင်းက ကောင်းကင်ပျံနေတဲ့ ကျီးကန်းတည်းဟူသော ခမျာ ဦးသန်းဌေး လည်ပင်းကို အကုသိုလ်အကျိုးပေးချိန်မို့ တည့်တည့်ကြီး တက်စွပ်မိတာ။ ယုန်လေးကိုချစ်ကြတဲ့၊ အားပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေပရိသတ်တွေပင်လျင် အခြားရိုက်ချက်တွေကို ယုန်လေးဖက်က ဝင်ကာကွယ်ပေးကြ ပေ မယ့် ဦးသန်းဌေးပါထည့်လို့ အပြောခံရတာကိုကျတော့ ကာကွယ်ပေးစရာ ဆင်ခြေရှာမရခဲ့ဘူး။ ယုန်လေးက ဘယ်သူတိုက်တွန်းမှုမှ မပါဘဲ ရိုက်တယ်လို့ ရှင်းလိုက်ပြီ၊ တစ်ယောက်ယောက် တိုက်တွန်းမှုများပါလို့ တိုက်တွန်းသူက ပြည်ခိုင်ဖြိုးဖက်ကဆိုရင်တော့။
ကိုယ့်သေတွင်းကိုတူးခဲ့ကြတာပဲလို့ တွေးခဲ့မိတာ ယုန်လေးရှင်းလိုက်လို့ မဟုတ်မှန်းသိရတာတော်သေးတယ်။ အစကတည်းက ပြည်ခိုင် ဖြိုးကို ဆန့်ကျင်ဖက်က သူခိုးပါတီလို့ စွပ်စွဲနေကြတာ။ တကယ်တော့ ခိုးတဲ့သူတွေ အများအပြား ပါကောင်းပါပေမယ်. တကယ်အရည် အချင်းပြည့်စုံသူတွေလည်း အများကြီးပါ။ သူတို့အောင်မြင်ချင်ရင် သူခိုးပုံရိပ်ကို ရှေ့တန်းမတင်ဘဲ၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ပုံရိပ်ကိုပွဲထုတ်ရမှာ၊ ဒီပါတီလည်း အခု ဗီဒီယိုကလှုပ်နှိုးလိုက်လို့ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်သိကြဖို့ကောင်းပြီ၊ ဘယ်လိုပုံရိပ်မျိုးပြောင်းလဲ ရှေ့တန်းတင်ရမယ် ဆိုတာ တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ကြတော့၊ ဒီအချိန်တောင် နှောင်းလွန်းပြီလားမသိ။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးကျတော့ သူတို့အစိုးရ ငါးနှစ်သက်တမ်းအတွင်း အထိုက်အလျောက်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ အနေအထား ကိုတောင် ခေါင်းဆောင် ပုံရိပ် ဂွမ်းနေမှုကြောင့် အတော်ကြီးရုန်းကန်ရဦးမှာလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
CRD: Aye Nay Win’s FB
ယုနျလေးMTVရဲ့ နောကျဆုံး ရိုကျခတျမှုက အနုပညာကဏ်ဍ။ သူ့ရိုကျထားတာကို ကွိုကျလို့ခြီးမှမျးတာ၊ မကွိုကျလို့ ဝဖေနျတာက သကျ ဆိုငျရာ ကာယကံရှငျတှရေဲ့ ပွောပိုငျခှငျ့ လှတျလပျမှု။ ဒါပမေယျ့ တျောတျောမကျြလုံးပွူးသှားမိတာက ဒီအထဲ ဝငျသရုပျဆောငျ၊ သီဆိုခဲ့တဲ့ ကလေး တဈယောကျ၊ နှဈယောကျဆီက တိုကျရိုကျပွနျကွားရတာ။ သူတို့ပွောတာက “လူတှေ စိတျဓာတျတှမေကောငျးဘူး။ line ပျေါ မတငျ ခငျ ရုပျရှငျရုံမှာ အားလုံးစုကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ လကျခုပျတှဝေိုငျးတီးကွပီးတော့၊ အမှားဆိုပီးဖွဈလာတော့မှ အခငျြးခငျြးတောငျ ပွနျ ကြုံးကွတယျ ” တဲ့။ အဲလို မတငျခငျ အမွညျ့ကွညျ့ခဲ့ဖူးသူတှကေ နောကျမှ ပွနျဖောငျးထုတဲ့အထဲပါတဲ့ သကျသတှေေ ပျေါလာရငျ။
သူတို့လညျး ဂှမျးပွီနျော။ ဦးသနျးဌေးရေ.. အားမငယျပါနှငျ့။ ဂှမျးဖျော ဂှမျးဖကျတှေ အဆဲခံသရဖူပွနျလုခငျြလုသှားဦးမှာ။သုံး ရကျလောကျ နတေော့ နညျးနညျး အနညျထိုငျစပွုတော့မှ အခွအေနေ ရုပျလုံးပျေါလာတယျ။ ဒီ ဗီဒီယိုထှကျလာပွီး အဖှဲ့အစညျး အသီးသီးအပျေါ အကြိုး သကျရောကျမှုတှကေိုကွညျ့ရငျ .NLD ဖကျက ပေါငျးလက်ခဏာ ဆောငျတဲ့ အောငျမွငျမှုအရရှိဆုံးပဲ။ သူ့ပါတီကိုထောကျခံသူတှေ အခု တဈ ခြိနျတညျးမှာ အသံကယျြကယျြလောငျလောငျ ထှကျလာတယျ။ အနုပညာရှငျ အခြို့ကပါ ဒီဗီဒီယိုကို ဝဖေနျခံရတော့ သူတို့နောကျကအား ပေးတဲ့ ပရိတျသတျတှကေိုပါ ရှေးကောကျပှဲနှဈမှာ ကွိုတငျစုစညျးပေးလိုကျသလိုဖွဈသှားတယျ။
နောကျပွီး နိုငျငံတကာမှာ နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျ တဈယောကျရဲ့ လုံခွုံရေးကို နှောကျယှကျတဲ့ ဖွဈရပျသို့မဟုတျ ပုံရိပျကို ဖွဈပျေါစရေငျ အ ဆိုပါခေါငျးဆောငျအပျေါမှာ ကွညျညိုမှု ကရုဏာ ဖွဈစတော ထုံးစံပဲ။ ၁၉၈၁ ခုနှဈ မတျလ (၃၀) ရကျနမှေ့ာ အမရေိကနျသမ်မတ ရဂေငျကို သနေတျသမား ဂြှနျ ဟငျကလီက မအောငျမွငျသော လုပျကွံမှုတဈခုဖွဈခဲ့ရာမှာ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့တှကေ ကယျထုတျနိုငျခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုကို လူ တှမွေငျခှငျ့ရလိုကျတယျ။ ဒီဗီယိုမထှကျခငျ သမ်မတရဲ့ ထောကျခံမှုစဈတမျး ၆၀% ရှိရာကနေ ဗီဒီယိုထှကျလာပွီးတော့ ၆၉% အထိခုနျတကျ သှားတယျ။ ဒါက တကယျဖွဈခဲ့တာ၊ တကယျမဟုတျဘဲ အနုပညာလှုပျရှား ဖနျတီးမှုအနနှေငျ့ သမ်မတ လယောဉျအပိုငျစီးတာတို့၊
အိမျဖွူတျော အသိမျးခံရတာမြိုး ရုပျရှငျရိုကျရငျလညျး လကျရှိသမ်မတအတှကျ စညျးရုံးရေး အမွတျထှကျတာပဲ၊ ဒါကွောငျ့ ကလငျတနျ လကျ ထကျရိုကျတဲ့ Air Force One မှာ သမ်မတဇာတျရုပျကို ကလငျတနျတို့ မိသားစုပုံမြိုးရိုကျတာ၊ အိုဘားမားလကျထကျက ဇာတျလမျးတှဲ 24 မှာ သမ်မတ Wayne Palmer ကို အိုဘားမားနှငျ့ ရုပျတူအောငျ ထညျ့ရိုကျတာလေ။ ဒါ တှကွေောငျ့ အကြိုးဖွဈခဲ့ကွတယျ။ ဒါကွောငျ့ သမ်မတတှဟော ရှေးကောကျပှဲနှဈမှာ လုပျကွံဖို့ကွိုးစားခံရတဲ့ သူရဲကောငျး ဇတျလမျးမြိုး သိပျရိုကျစခေငျြတာ။ အခုလညျး ဒီမှာ ဟိုနကေ့ video ထှကျပွီးတဲ့နောကျ NLD ခေါငျးဆောငျပိုငျး အတှကျ တကယျလညျး စညျးရုံးရေး အထောကျအကူဖွဈသှားတာပဲ။
ပထမပိုငျး အကှကျမှာ စီးပှားရေး ရပျဆိုငျးလို့ အောကျခွလေူကတနျးစားတှေ ထိခိုကျတာမြိုးရိုကျတာကွောငျ့ တကယျ ခံစားရသူတှကွေား မှာ NLD ပုံရိပျကို အထိုကျအလြောကျ ထိခိုကျစပေမေယျ့ နောကျဆုံးမှာ ကရုဏာအပွညျ့ပွနျရလို့ အားလုံးခွုံကွညျ့ရငျ NLD အမွတျအ ထှကျဆုံးပဲ။ NLD က စီမံခနျ့ခှဲမှုလိုအပျခကျြကွောငျ့ သကျတနျးငါးနှဈအတှငျး အားမရစရာ ဖွဈခဲ့တာတှကေို ခေါငျးဆောငျပုံရိပျနှငျ့ ပွနျ ဆယျပွီး အခွအေနကေောငျးနိုငျသေးတယျဆိုတဲ့သဘော သိလိုကျရတယျ။ပွညျခိုငျဖွိုး ဖကျကကတြော့ အဂှမျးဆုံးဖွဈသှားတာ၊ အစညျး ဝေးမှာ NLD အမတျမငျးတှရေော၊ ပွညျခိုငျဖွိုး အမတျမငျးတှရေော တကျရောကျဆှေးနှေးပမေယျ့ NLD အမတျတှကေိုပဲ။
ပရိသတျက သတိထားမိကွတာ၊ ပွညျခိုငျဖွိုးကို လူရာသှငျးပွီး ထညျ့ကို အပွောမခံရတာ ပထမ ဂှမျးခကျြ၊ နောကျဆုံး ပွညျခိုငျဖွိုး ဥက်ကဌ ဦးသနျးဌေးပုံထညျ့လိုကျတာကကတြော့ ….. အိုး ဘာပွောကောငျးမလဲ။ ဤနရောတှေ သေးပနျးပါလို့ ဆိုငျးဘုတျခြိတျပေးလိုကျတာကြ နတောပဲ၊ ဒီဗီဒီယိုကို မကွိုကျတဲ့သူတှကေ ယုနျလေးပွီးရငျ မို့မို့မွငျ့အောငျ ဒုတိယလိုကျပွီး ဆဲကွလိမျ့မယျလို့ ထငျတာ ဦးသနျးဌေးက သူလညျး ဝငျမရိုကျရရှာဘဲ မမို့ရဲ့ နရောဝငျယူပွီး အဆဲခံပေးသှားတာ။ လှုပျရှားပွီး သရုပျဆောငျစရာတောငျ မလိုဘူး။ ရုပျသေ ဓါတျပုံ လေးနှငျ့ အဆဲခံသရဖူ ဝငျလုသှားတာ။ “ထသှားမှ အကြိုးမှနျးသိ” လို့ဆိုရအောငျကလညျး ။
သူက ဖိုးပါခငျြအဖွဈ ဝငျသရုပျဆောငျ ရတာလညျး မဟုတျဘဲ ပိဋကတျတျောထဲပါတဲ့ လထေဲလှငျ့လာတဲ့ ဗီဒီယိုတညျးဟူသော မီးကှငျးက ကောငျးကငျပြံနတေဲ့ ကြီးကနျးတညျးဟူသော ခမြာ ဦးသနျးဌေး လညျပငျးကို အကုသိုလျအကြိုးပေးခြိနျမို့ တညျ့တညျ့ကွီး တကျစှပျမိတာ။ ယုနျလေးကိုခဈြကွတဲ့၊ အားပေးကွတဲ့ မိတျဆှပေရိသတျတှပေငျလငျြ အခွားရိုကျခကျြတှကေို ယုနျလေးဖကျက ဝငျကာကှယျပေးကွ ပေ မယျ့ ဦးသနျးဌေးပါထညျ့လို့ အပွောခံရတာကိုကတြော့ ကာကှယျပေးစရာ ဆငျခွရှောမရခဲ့ဘူး။ ယုနျလေးက ဘယျသူတိုကျတှနျးမှုမှ မပါဘဲ ရိုကျတယျလို့ ရှငျးလိုကျပွီ၊ တဈယောကျယောကျ တိုကျတှနျးမှုမြားပါလို့ တိုကျတှနျးသူက ပွညျခိုငျဖွိုးဖကျကဆိုရငျတော့။
ကိုယျ့သတှေငျးကိုတူးခဲ့ကွတာပဲလို့ တှေးခဲ့မိတာ ယုနျလေးရှငျးလိုကျလို့ မဟုတျမှနျးသိရတာတျောသေးတယျ။ အစကတညျးက ပွညျခိုငျ ဖွိုးကို ဆနျ့ကငျြဖကျက သူခိုးပါတီလို့ စှပျစှဲနကွေတာ။ တကယျတော့ ခိုးတဲ့သူတှေ အမြားအပွား ပါကောငျးပါပမေယျ. တကယျအရညျ အခငျြးပွညျ့စုံသူတှလေညျး အမြားကွီးပါ။ သူတို့အောငျမွငျခငျြရငျ သူခိုးပုံရိပျကို ရှတေ့နျးမတငျဘဲ၊ အရညျအခငျြးရှိတဲ့ပုံရိပျကိုပှဲထုတျရမှာ၊ ဒီပါတီလညျး အခု ဗီဒီယိုကလှုပျနှိုးလိုကျလို့ ကိုယျ့အဖွဈကိုယျသိကွဖို့ကောငျးပွီ၊ ဘယျလိုပုံရိပျမြိုးပွောငျးလဲ ရှတေ့နျးတငျရမယျ ဆိုတာ တော့ ကိုယျ့ဟာကိုယျဆုံးဖွတျကွတော့၊ ဒီအခြိနျတောငျ နှောငျးလှနျးပွီလားမသိ။
ပွညျခိုငျဖွိုးကတြော့ သူတို့အစိုးရ ငါးနှဈသကျတမျးအတှငျး အထိုကျအလြောကျလုပျပွနိုငျခဲ့တဲ့ အနအေထား ကိုတောငျ ခေါငျးဆောငျ ပုံရိပျ ဂှမျးနမှေုကွောငျ့ အတျောကွီးရုနျးကနျရဦးမှာလို့ ပွောလိုကျပါတယျ။
ပူလို့ပါဆိုပြီး အတွင်းသားလေးတွေပေါ်လွင်အောင် ချွတ်ပြလိုက်တဲ့ XMUE XMUE ရဲ့ အကြမ်းစားဗီဒီယို
မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ ပုံစံလေးတွေနဲ့ ရေကူးကန်ထက်မှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ Mဆိုင်းလုနဲ့မေ(VIDEO)
အသည်း တယားယား ဖြစ်သွားစေ မယ့် ဘေဘီမောင် ရဲ့ အမိုက်စားVIDEO